Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Siyaasad Ma Gasho Hiilo Magangelyo
Hanaanka ay ku shaqeyso siyaasadda dimoqaraadiyada waa mid ku dhisan siyaasad wadareed oo ah nidaam ogolaanaya wadanoolaashaha fikrado siyaasadeed oo kala duwan, kuwaas oo ka turjumaya aragtiyada siyaasadeed ee xisbiyo badan oo mabda’yadoodu kala duwan yihiin. Dowladda rumeysan xukunka rayidka ee ku saleysan dimoqaraadiyada waxey ku qasban tahay iney ogolaato mucaaradka siyaasadeed oo ah shardiga ugu weyn ee jiritaanka dowlad dimoqaraadiya. Dimoqaraadiyadu waxey habdhaqanka dastuurkeedu raacsan yahay jiritaanka cadowtooyada siyaasadeed ee ka dhexeysa xisbiyada siyaasadeed oo si nabada awooda siyaasadeed u adeegsada.
Dhaqankeedana waxaa ka mida jiritaanka mucuuradka oo leh miisaan siyaasadeed oo dheelitira xukuumadda talada haysa iyo hanaanka guud ee siyaasadda dalka. Cida siyaasadda ku guuleysta ma ahan iney milkiso dhamaan awooda siyaasadeed, waxaana qasab ku ah kuwa guuleystey iney u ogolaadaan mucaaradka ka qeybgalka masuuliyada geedi-socodka siyaasadeed ee looga arinsanayo aayaha dalka.
Dheelitirka looga hortegayo iney koox keligeed hanato talada dalka waxaa ilaaliya dhowrista xuquuqda mucaaradka, taas oo aqoonsigeedu uu dhalin karo damaanadqaad wadahadal siyaasadeed oo waxtar leh iyo wakhti dheer in lagu wadanoolaado degenaansho dimoqaraadiya.
Mucaaradka iyo kooxda talada haysa waxey isku hayaan waa awooda siyaasadeed ee dalka. Haddii madaxda dalka aysan ku imaan doorasho dadweyne oo si toosa ay ugu codeeyeen rabitaankooda oo xor ah, madaxda guuleysatey waxey ku qasban yihiin iney soo dhisaan dowlad wadajira oo ka kooban xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira, kuwaas oo aaminsan dhaqanka siyaasad nabadgelyo oo ku dhisan xukun dimoqaraadiya. Farabadida iyo xoogeysiga mucaaradka wuxuu ku xiran yahay dhaqanka xukuumada ay ama ku soo dhoweyneyso mucaaradka ama ay ku caburineyso ama habdhaqanka kelitalisnimo ee madaxda dowladdu ay ku dooneyso aragtideeda iyo xisbigeeda keliya inuu yeesho waxkadhihida siyaasada dalka , iyaga oo adeegsanaya ku tagrifalka awooda dowladda iyo hantida qaranka.
Waxaa hubaal ah ineysan hureyn dowladdu iney tixgeliso kala fikir duwanaashaha aan fikirka siyaasadeed heshiiska loogu ahayn iyo in mucaaradka ay metelayaan qeybo ka mida shacabka oo aaminsan aragtidooda siyaasadeed. Mucaaradku wuxuu wadaa talooyin xalkoodu ka duwan yahay kuwa madaxda dowladda, waxeyna doonayaan iney cabiraan dareenkooda ku aadan mucaaradnimada siyaasda dowladda iyo tilaabooyinka ay qaadayaan oo aan waxtarka u lahayn danta guud iyo maslaxada shacabka.
Mucaaradka dantiisu waa iney madaxda dowladda kula tartamaan adeegsiga awooda siyaasadeed oo fashilkooda ay u soo gudbiyaan dadweynaha, waxaana akhlaaqdooda wanaagsan ka mida saddex mabda’ oo kala ah:
1) ujeedada loo tartamayo oo lagu koobo bartilmaameysiga hanashada awooda siyaasadeed. 2) muujinta dulqaadka loogu adeegsanayo masuuliyada awooda.
3) sameynta isbedel xukunka lagu tuurayo.oo raacsan nidaamka dimoqaraadiga.
Xukuumadda waxaa looga digayaa ineysan ku fogaan waxyeeleynta mucaaradka, iyadoo xanibeysa xuquuqdooda, xoriyadooda, iyo ka hadalka aragtiyadooda ka duwan kuwooda. Caafimaadqabka nolosha siyaasadda waxaa xoojiya oo xasiliya daahfurnaanta ay mucaaradku ku dabagelayaan geedi-socodka siyaasadda dalka si shacabka ay u helaan wargelin buuxda oo ay wax ku kala dooran karaan.
Mucaaradka waa in la siiyo fursad ay xildhibaanada baarlamaanka ugu soo gudbin karaan fikirkooda, lagana joojiyo xanibaada ay xukuumadu kula kaceyso, iyo in si xora loogu furo xogta dadweynaha oo ay ka doonayaan xaafiisyada dowladda. Waxaa dowladda lagula talinayaa iney dhisto jawi isogolaasho oo ay ugu wadanoolaan karaan ismaandhaafka siyaasadeed ee mucaaradka iyo madaxda dowladda si aysan halis u gelin jiritaanka dowladnimadu. Dardaaranka la siinayo waxaa ugu weyn in mucaaradka laga qeybgeliyo xukuumadda si loo dhiso dowlad qaran oo ka kooban muxaafid iyo mucaarid, taas oo xoojineysa kalsoonida shacabku ku qabo si wanaagsan u adeegsiga hanaanka siyaasadda dalka.
Haddii mucaaradka loo diido ka qeybqaadashada siyaasadda dalka waxaan la hureyn si deg deg ah in loo tuuro madaxda ku fashilantay hogaaminta dalka.
Waxaa horay u guuldareysatay iskuday badan oo lagu doonayey in isbedel lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya. Waxaa dhimatay rajada ay siyaasiyiinta madaxabanaan ku doonayeen iney ku saxaan qaladaadka dowladda. Waxaa si qaawan Muqdisho uga bilaabatay xoog u adeegsiga siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda. 2018 waxey Soomaaliya ku soo kordhineysaa shar badan oo horseeda isugaarsi, abaar, dagaal beeleedyo, abaabulo hubeysan, iyo in dib loogu noqdo dagaal sokeeye.
Dr. Haji Saciid Ciise Maxamud (SACIM)
Waxaa muuqata dagaalada soo socda iney ka khatar badan yihiin kuwii hore, waxaana saadaashaas xoojinaya sida cad ee boqortooyooyinka Khlaiijka khilaafkooda uu uga muuqdo Soomaaliya, iyaga oo doonaya sida Yemen dagaalada ka socda in sidoo kale uu dagaalkooda ka bilowdo Soomaaliya, taas oo keeneysa labada xulafo xoogga isbaheysigooda in lagu tijaabiyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya khilaafka Carabta dhexdhexaad kama aha, wuxuuna si hoose hiilada ula wadaaga mid ka mida labada isbaheysi oo ay wadaagaan siyaasada iyo xeeladaha sirdoonka, kuwaas oo lagu dhabarjebinayo dadaalada waxqabad oo ay wadaan isbaheysiga ka soo horjeeda. Waxaa xataa socota iskaashiga koox-diimeedyada Ictisaam iyo Shiicada oo la doonayo dowlada iyo xulafadeeda iney garab u noqdaan.
Dhibaatada Soomaaliya heysata waa hogaanxumo, sidaas daradeed mucaaradku kama aamusi karaan, wuxuuna xalkeedu yahay in madaxweynaha lagu qanciyo inuu danta dadka iyo dalka u tanaasulo oo uu iscasilo, haddii sidaas la waayana xilka laga tuuro inta aysan iman masiibooyinka ku soo socda dalka. Madaxweyne sanad xeelad siyaasad wax ku xalin waayey, xoog iyo caburin waxba kuma xalin karo. Waxa keliya ee ka dhalan karta waa dowladda oo ku burburta. Ha loo dadaalo dalka in laga qabto hogaamiyaha leh hogaanxumada aan dawada lahayn. Yaan lagala gamban dhagatuurka siyaasadeed oo dalka looga cirdeynayo madaxda hogaaminta dalka ku fashilmay.
Akhriso; War Saxaafadeed ay Puntland ka soo saartay Weerarka Tukoraq